ရှင်ဂန်အသိအမှတ် မြေ - ဝီကီပီးဒီးယား
ရှင်ဂန်အသိအမှတ် မြေဆိုသည်မှာ ရှင်ဂန် စာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုထားကြသော မြေနေရာကိုဆိုလိုသည်။ ထိုနိုင်ငံများရှိ နိုင်ငံသားများသည် ရှင်ဂန်အသိအမှတ် မြေတွင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မပါဘဲ မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားဖြင့် သွားလာနိုင်သည်။ ရှင်ဂန်နယ်မြေအတွင်းရှိ နယ်စပ်များရှိ စစ်ဆေးရာ ဌာနများကို ပယ်ဖျက်လိုက်သော်လည်း၊ ရှင်ဂန်ပြင်ပရှိနိုင်ငံများ နှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် နယ်စပ်များတွင် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ လေယာဉ်ကွင်းများတွင် ရှင်ဂန်နယ်မြေတွင်း ပျံသန်းသောသူများသည် ရှင်ဂန်ပြင်ပသို့ သွားမည့် နိုင်ငံများ နှင့် ရှင်ဂန်နယ်မြေအတွင်း သွားမည့် နေရာဟူ၍ ခွဲခြားထားသည်။
ဩစတြီးယားနိုင်ငံ 7004838710000000000♠83871 7006841463800000000♠8414638 ၂၈ ဧပြီ ၁၉၉၅ ၁ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၉၇
ဘယ်ဂျီယမ်နိုင်ငံ 7004305280000000000♠30528 7007110070200000000♠11007020 ၁၄ ဇွန် ၁၉၈၅ ၂၆ မတ် ၁၉၉၅
ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ 7004788660000000000♠78866 7007105358110000000♠10535811 ၁ မေ ၂၀၀၄ ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၇b
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ (excluding Greenlandd and the Faroe Islandsd) 7004430940000000000♠43094 7006556421900000000♠5564219 ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၉၆ ၂၅ မတ် ၂၀၀၁
အက်စတိုးနီးယားနိုင်ငံ 7004452260000000000♠45226 7006134019400000000♠1340194 ၁ မေ ၂၀၀၄ ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၇b
ဖင်လန်နိုင်ငံ 7005338145000000000♠338145 7006539170000000000♠5391700 ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၉၆ ၂၅ မတ် ၂၀၀၁
ပြင်သစ်နိုင်ငံ (excluding overseas departments and territories) 7005674843000000000♠674843 7007658218850000000♠65821885 ၁၄ ဇွန် ၁၉၈၅ ၂၆ မတ် ၁၉၉၅
ဂျာမနီနိုင်ငံ 7005357050000000000♠357050 7007817996000000000♠81799600 ၁၄ ဇွန် ၁၉၈၅ ၂၆ မတ် ၁၉၉၅c
ဂရိနိုင်ငံ 7005131990000000000♠131990 7007107876900000000♠10787690 ၆ နိုဝင်ဘာ ၁၉၉၂ ၂၆ မတ် ၂၀၀၀
ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ 7004930300000000000♠93030 7006997900000000000♠9979000 ၁ မေ ၂၀၀၄ ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၇b
အိုက်စလန်နိုင်ငံa7005103000000000000♠103000 7005318452000000000♠318452 ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၉၆ ၂၅ မတ် ၂၀၀၁
အီတလီနိုင်ငံ 7005301318000000000♠301318 7007606815140000000♠60681514 ၂၇ နိုဝင်ဘာ ၁၉၉၀ ၂၆ အောက်တိုဘာ ၁၉၉၇
လတ်ဗီယာနိုင်ငံ 7004645890000000000♠64589 7006224535700000000♠2245357 ၁ မေ ၂၀၀၄ ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၇b
လစ်တန်စတိန်းနိုင်ငံa7002160000000000000♠160 7004360100000000000♠36010 ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၈ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁
လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံ 7004653030000000000♠65303 7006320706000000000♠3207060 ၁ မေ ၂၀၀၄ ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၇b
လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ 7003258600000000000♠2586 7005511840000000000♠511840 ၁၄ ဇွန် ၁၉၈၅ ၂၆ မတ် ၁၉၉၅
မော်လတာနိုင်ငံ 7002316000000000000♠316 7005417608000000000♠417608 ၁ မေ ၂၀၀၄ ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၇b
နယ်သာလန်နိုင်ငံ (excluding Aruba, Curaçao, Sint Maarten and the Caribbean Netherlands) 7004415260000000000♠41526 7007167037000000000♠16703700 ၁၄ ဇွန် ၁၉၈၅ ၂၆ မတ် ၁၉၉၅
(excluding Svalbarde) 7005385155000000000♠385155 7006499330000000000♠4993300 ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၉၆ ၂၅ မတ် ၂၀၀၁
ပိုလန်နိုင်ငံ 7005312683000000000♠312683 7007381868600000000♠38186860 ၁ မေ ၂၀၀၄ ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၇b
ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ 7004923910000000000♠92391 7007106477630000000♠10647763 ၂၅ ဇွန် ၁၉၉၂ ၂၆ မတ် ၁၉၉၅
ဆလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံ 7004490370000000000♠49037 7006544007800000000♠5440078 ၁ မေ ၂၀၀၄ ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၇b
ဆလိုဗေးနီးယားနိုင်ငံ 7004202730000000000♠20273 7006204895100000000♠2048951 ၁ မေ ၂၀၀၄ ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၇b
စပိန်နိုင်ငံ (excluding Ceuta and Melillaf) 7005506030000000000♠506030 7007460301090000000♠46030109 ၂၅ ဇွန် ၁၉၉၂ ၂၆ မတ် ၁၉၉၅
ဆွီဒင်နိုင်ငံ 7005449964000000000♠449964 7006941557000000000♠9415570 ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၉၆ ၂၅ မတ် ၂၀၀၁
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံa7004412850000000000♠41285 7006786650000000000♠7866500 ၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၄ ၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၈
a. ^ States outside the EU that are associated with the Schengen activities of the EU, and where the Schengen rules apply.
b. ^ For overland borders and seaports; since 30 March 2008 also for airports.
c. ^ East Germany became part of the Federal Republic of Germany, joining Schengen, on3October 1990. Before this it remained outside the agreement. Despite some media reports, Heligoland is not outside Schengen; it is only outside the European Union Value Added Tax Area.
d. ^ Greenland and the Faroe Islands are not included in the Schengen area, although there might be relaxed checks in the Faroe Islands for flights from Scandinavia, thanks to the Nordic Passport Union, althoughapassport is still recommended. A Schengen visa issued byaSchengen state will not allow the holder access to either territories, onlyaDanish visa stamped with either "Valid for the Faroe Islands" or "Valid for Greenland", or both.
e. ^ However, Jan Mayen is part of the Schengen Area.
f. ^ The full Schengen acquis applies to all Spanish territories, but there are border checks on departure from Ceuta and Melilla to Spain or other Schengen countries, because of specific arrangements for visa exemptions for Moroccan nationals resident in the provinces of Tetuan and Nador.
↑ Eurostat Population Estimate။ Eurostat (1 January 2010)။ 8 January 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ This terminology is, for example, used in the Final Act of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176,10 July 1999, p. 36).
↑ The final step of Schengen enlargement—controls at internal air borders to be abolished in late March။ Slovenia's EU Presidency (25 March 2008)။
↑ At the Gate - FAE - Vága Floghavn။ Floghavn.fo။ 2011-09-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ General Information on Schengen Short-Term Visas။ Royal Danish Embassy in London (4 June 2009)။ 19 April 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Article 14 of the Final Act of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10/07/1999 P. 36) excludes Svalbard from the application of the Schengen rules. As no similar exception was made respecting Jan Mayen, it is part of the Schengen Area.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရှင်ဂန်အသိအမှတ်_မြေ&oldid=720362" မှ ရယူရန်
၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။